Espaina - Wikipedia
Reino de España ((es))
Fanjakan'i Espaina ((mg))
Teny filamatra : Plus Ultra
Tanàna ngeza indrindra Madrid
- filoha ny Governemanta espaniola Fanjakana
- Rano (%) faha 51
- hakitroka faha 29
Anaran'ny mponina Espaniola
IDH (2005) (mitombo) 0,949 (ambony) 13
Sandam-bola Euro (EUR)
; UTC+2: (CEST)
Hiram-pirenena Marcha Real
I Espaina dia firenena eorôpeana ao amin'ny saikanosy Iberika, ao atsimon' i Eorôpa. Ny renivohiny dia i Madrid, ary ireo firenena manodidina azy dia i Frantsa ary Andôra any avaratra ary Pôrtogaly any andrefana.
Ny Ibera no mponina tao Espaina tamin'ny taonarivo faha-2 tal. J.K. Ary tamin’ny taonjato faha-5, dia tonga ny Seltibera, mponina indô-eoropeanina izay nipetraka tao Espaina hatramin'ny taonjato voalohany taor. J.K. Mipetraka teo amin'ny morontsiraka mediteraneanina ireo mponina fenisianina, grika ary kartajinianina nanomboka tamin'ny taonjato fahasivy tal. J.K.
Nanomboka tamin'ny taonjato faha-2 tal. J.K., nanjaka tao Espaina ny Romana avy any Italia ary nentiny tao ny fiteniny sy ny fombany ary ny lalàny. Ho faritany romana io toerana io mandritry ny 700 taona.
Taorian'ny faharesen'ny Romana tamin'ny taonjato faha-5 dia nonina tao amin'ny saikanosy Iberika ireo mponina jermanika: Soeva, Vandalo ary Visigoty. Nifindra tany Afrika Avaratra ny Vandalo tamin’ny taonjato faha-3. Ny Visigoty no tena nanjaka tao Espaina hatramin'ny fahatongavan'ny mponina miozolmana tamin'ny taonjato faha-7.
Nanomboka tamin'ny taonjato faha-7 (fanjavonan'ny Visigoty) hatramin'ny taonjato faha-16, nanjaka tao Espaina ny mponina miozolmana (Maoro, Mozarabo), teo afovoany ary tany atsimon'i Espaina indrindra indrindra.
Tamin'ny taona 756, nahaleotena i Espaina miozolmana, nandritry ny andro nanjakan'ny Omeiadin’i Cordoba. Nivadika ho kalifata i Espaina miozolmana. Nihakely ny fahefan’ilay kalifata lehibe tamin'ny taonjato faha-11, ka voazarazara fanjakana (taifa) madinika miisa dimy amby roapolo. Nohararaotin'ireo fanjakana espaniola io fizarazarana io ary io no nahafahan'ny Espaniola nanomboka ary namarana ny Reconquista, tapitra tamin'ny taona 1492; tamin'io taona io ihany no nahitana ny kaontinanta amerikana. Tapitra tamin'ny taona 1512 ny fanaovana an'i Espaina ho fanjakana iray, ary tamin'io fotoana io dia nandefasana miaramila (Conquistador) maro dia maro tany Amerika handresena ireo fanjakana teratany (Azteka, Inka) ary hanorenana zanatany lehibe (Espaina Vaovao, Kastila Vaovao, Granada Vaovao).
I Espaina dia firenena manana morontsiraka eo amin'ny Ranomasina Mediteranea ary eo amin'ny Ranomasimbe Atlantika. Ao atsimon'i Eoropa no misy azy, ao amin'ny saikanosy Iberika. Mizara sisintany amin'i Pôrtogaly, Frantsa, Andôra; Fanjakana Mitambatra ary Marôka i Espaina. Ireo tany espaniola any ivelan'i Espaina dia i Ceuta sy i Melilla.
I Wikimedia Commons dia manana aino aman-jery mikasika an'i : Spain
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Espaina&oldid=1040904"
Voaova farany tamin'ny 4 Desambra 2021 amin'ny 08:32 ity pejy ity.